4 Dzidzisai Route Views To Make Your Instagram Ngachivheneke | Save A Train
musha > Travel Europe > 4 Dzidzisai Route Views To Make Your Instagram Ngachivheneke
Nguva yekuverenga: 2 maminitsi(Last Updated On: 03/07/2020)
Vatariri nechitima vakasununguka, zvakatipoteredza noushamwari uye rinopa yevedza maonero, akakwana nokuita Instagram yenyu zvizhinji kuwedzera kutarisika. Heano 4 chitima nzira maonero kuti Instagram wako nhoroondo chipenye.
Dzidzisai nzira anoona No.1 – West Highland Line, Scotland
Scotland famously ane mamwe yakanaka nharaunda uye kudzidzisa nzira maonero munyika. ichi njanji rwendo inopa dzakawanda maonero kure moors, lochs, uye makomo. Apo kufamba West Highland Line, Uchazonyatsonakidzwa rombo zvokuti ruzivo asi kunozivikanwa Glenfiddich Viaduct. Tarirai munodziziva? Ndizvo nokuti anoratidzwa sezvo Hogwarts Express vari Harry Potter kufirimu kodzero. Fungidzira mabhatani-maviri iwo maonero achawana.
Glacier Express, Siwizarendi
Kana uchida munhu nomumugwagwa kwaitora nguva kumhanya chitima nzira maonero, ichi ndicho nzira yako vateveri Instagram. Your vakapfeka Panoramic maonero uchatanga aine maonero famed Matterhorn. From Zermatt, uchaita ako-awa manomwe njanji rwendo achitevedza UNESCO World Heritage Site nzira kuna St Moritz. Nakidzwa mukakachurwa mapikicha sezvo mbiri Alpine vistas maonero apfuura hwindo rako.
The Flam Railway, Noweyi
A mapfupi rwendo – uyu-awa nechitima atasve kubva Myrdal kuna Flam rinongova nokuti maonero. Uye vateveri dzenyu rombo Insta achaita kukutendai. Muchaona kuti Nali tanera, kufema Kjosfossen mapopoma emvura, uye Vakamupfekedza fjords ose Noweyi.
Yedu yekuvhara sarudzo yechitima nzira maonero – Inlandsbanan, Siwidheni
Kana Glacier Express haana chando zvakakwana uye chando here, ipapo uchaita kuda kure negungwa Line. Izvi 14 maawa nechitima uchinzvera kunotanga Kristinehamn usati nzira kwayo kuburikidza untamed Air nomunzvimbo dzine kurutivi Gallivare. Kubva pahwindo rako, muchaona kweArctic Circle uye – kana iwe chengeta meso ako akasvuura – vamwe dzomusango dziri poro, Stony, uye Elk.
Saka zvino mushure iwe wakadzidza pamusoro nechitima nzira maonero uye zviri Ready kuenda kuchinja upenyu-njanji atasve paunenge rodzai yako Instagram nhoroondo uye vawane vateveri itsva? Bhuku rako kurota chitima rwendo nhasi pa Save A Train. Uye iwe unogona zvakare kutarisa yedu Instagram account instagram.com/saveatrain
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-train-route-views-to-make-your-instagram-account-shine/ - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#scotland Instagram Siwidheni Train Travel famba travelnorway travelswitzerland